၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXV
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXV
Posted by Kyaemon on Dec 11, 2017 in Business & Economics, Education, Photography, Think Different, Think Tank, Travel |2comments
2. Reservoir Triggered Seismicity Phenomena and Development of their Evaluation and Interpretation
3. Frequency of Reservoir Triggered Seismicity
4. Characteristics of Reservoir Triggered Seismicity
5. Mechanism of Reservoir Triggered Seismicity and Rheology of Earth Crust Materials
6. Pore Pressures Diffusion Time
7. General Statement on Understanding RTS Phenomena
8. Effects of Reservoir Impounding
9.1 Hsingfengkiang Dam Case History
9.2 Mratinje Dam Case History
9.3 Kurobe Dam Case History
9.4 Takase Dam Case History
9.5 Poechos Dam Case History
10. Assessing the Potential and Monitoring the Reservoir Triggered Seismicity
11. Closing Considerations
Construction began in 2001 and was finished late 2006 Wikipedia
၊ဦးဝင်းမျိုးသူက၂၀၀ရ ၂၀၀၈ လို့ပြောတာကမမှန်ပါ၊၊၂၀၀၆ကထဲကပြီးနေပါတယ်၊၂နှစ်လောက်ဒီတိုင်းပြစ်မထားပါ
and filling of the reservoir in 2004 had led to the disaster. The Telegraph
၃၊ New York Timesက၂၀၀၄မှာဆည်ရေစတင်သွင်းတို့အရာထမ်းတွေကခွင့်ပြုတယ်
Officials allowed the reservoir to fill with water in late 2004. New York Times
၄၊ NCBI၊ တို့ပြောတာက၂၀၀၅စက်တင်ဘာလမှာရေစတင်ဖြည့်ယူတယ်
China, began in September 2005 and was followed 2.7 years later by the 2008 Mw 7.9 Wenchuan
NCBI NLM NIH PMC
၅၊ HowStuffsWork Science၊သိပ္ပံစာဆောင်၂၀၀၄မှာရေစသွင်းတယ်လို့ပြော
In the case an earthquake, it’s difficult to prove beyondadoubt that the culprit wasadam. It’s just so hard to know exactly what’s going on beneath the surface, with so many factors at work. In the case of the 2008 Sichuan earthquake, for instance, the jury is still out. While 730 minor earthquakes were recorded within the first year of the Zipingpu reservoir’s first filling in 2004, most scientists agree it’ll takealot more research before the Zipingpu Dam can be conclusively linked to the big one [source: LaFraniere]. HOWSTUFFSWORK SCIENCE
Initial impoundment of the reservoir commenced in September 2005 (2.7 years before the Wenchuan earthquake SCIENCEDIRECT
တကယ်လို့သာ၊ပြီးစီးတဲ့နေ့ရက်၂၀၀၆ကိုသိရက်နဲ့၂၀၀ရ ၂၀၀၈ ၂၊နှစ်ကာလလို့ဝါးပြီးအာလူးပေးရင်ပိုဆိုးတာပေါ့၊
To do this will require, most importantly, ships, the newer the better, and lots of them. The market is currently served by 52 cruise liners of varying capacities and older vintages, with the potential to carry 2.17 million passengers across 1,000 cruises, according to the Cruise Lines International Association (CLIA)….
Singapore’s Berge Bulk to signaLOI for the constructions with CSSC Guangzhou Longxue Shipbuilding & CSIC Bohai Shipbuilding Heavy Industry.
Singapore’s Berge Bulk is planning to place an order for up to eight very large ore carriers (VLOC) at China’s two state-owned shipyards.
The eight newbuildings are scheduled for delivery in 2014 and 2015 and are expected to cost around $57-58m per ship….
Other newbuildings within the Lomar fleet include eight firm orders and two purchase options for 64,000 dwt ‘Ultramax’ bulk carriers from the COSCO Group in China…
Grieg Shipping have added to their existing orders at Dayang, with two further units of Ultramaxes, due for delivery within September and December 2015, this takes their order at that yard to four ships.
Wah Kwong Shipping have now also placed order at Chengxi Shipyard for four 64,000dwt Ultramaxes scheduled for delivery within 2016.
Ariston Navigation have also increased their order at Jinling Shipyard, with declaration ofafurther 35,000dwt Handysize bulker for delivery within Jan 15.
Fujian Shipping Company have placed orders for2x 105,000dwt Bulkers for delivery within June 15 and Mar 16 for2x 105,000dwt Bulkers at CIC Jiangsu Shipyard.
Clarkson Hellas report that Sungdong Shipyard have taken orders for4+2units of MR’s for Breakwater Capital, deliveries are understood by Clarkson Hellas to run from 2H 2015 and into 2016.
Zhongzhou Shipping Co. Ltd have placed orders for6x 1,600 teu container ships scheduled for delivery within 2015 and into 2016.
၊Seven Seas Investment ကကြီးမှူးတဲ့ဟော်တယ်အနေအထားပုံတူက၁၄၅သန်း$ကုန်ကျမယ်ဖြစ်ပြီးဝူဟန်မှာလုပ်မယ်၊
Construction of China’s first mothership specifically designed for the manned submersible ‘Jiaolong’ has commenc…
China’s manned submersible Jiaolong finishedadive in “Challenger Deep” in the Mariana Trench, the world’s deepest known trench, on Tuesday.
Chinese manned deep-sea research submersible Jiaolong [Photo: baidu.com]
The latest dive was the first of 10 dives planned for the third stage of China’s 38th oceanic expedition.
Scientists also tested the submersible’s technical and communication equipment, including its mechanical arms, through Tuesday’s dive.
“The submersible’s general technical conditions are stable, and various staff cooperated smoothly, fulfilling the scheduled mission and layingafoundation for deeper dives in the future,” said Wu Changbin, commander of the expedition’s third stage.
ဂျာလုံ (သုတေသနရေငုပ်သင်္ဘောက Marianna Trench ၊မှာ၇၀၆၂မီတာ၊၂၃၁၆၉ပေထိဆင်းသက်ခဲ့
China Daily, November 4, 2017
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – အမှတ် ၆နဲ့၁၁ကိုညွှန်း
ချီပြီးနှစ်စဉ်ရောင်းရတယ်၊ Wuhan Openဆိုပြီးနှစ်စဉ်တင်နစ်ြပြိုင်ပွဲလုပ်လာတယ်
ခုခံမှုနှငျ့ ရငျဆိုငျလာရသော တရုတျ ပိုးလမျးမသဈ စီမံကိနျး
ပါကစ်စတနျနိုငျငံက တရုတျ-ပါကစ်စတနျ စီးပှားရေး စငျ်ကွနျ၏ တစိတျတပိုငျးဖွဈသော အမရေိကနျ ဒေါျလာ ၁၄ ဘီလီယံတနျ Diamer-Bhasha ဆညျ
ဥရောပ၊ အရှေ့အလယျပိုငျး၊ အာဖရိကနှငျ့ အာရှ၏ အခွားအစိတျအပိုငျးမြားသို့ ဆကျသှယျမညျ့ တရုတျနိုငျငံက အစှမျးကုနျ မွှူဆှယျနသေော ခတျေသဈပိုးလမျးမ စီမံကိနျး (One Belt, One Road –OBOR) သညျ အလှနျ ရညျမှနျးခကြျကွီးသော အခွခေံအဆောကျအအုံ စီမံကိနျးမြား တညျဆောကျရေးတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ တရုတျအစိုးရက လိုအပျနခြေိနျ ပါကစ်စတနျနှငျ့ နီပေါတို့က တရုတျနိုငျငံနှငျ့အတူ ဆညျမြား တညျဆောကျမညျ့ သဘောတူညီခကြျမြားမှ နုတျထှကျခဲ့ကွသညျ။
သဘောတူညီခကြျမြားတှငျ ပါဝငျသော စညျးကမျးသတျမှတျခကြျမြားကို သဘောမတူသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
အဆိုပါနိုငျငံမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ စီးပှားရေးနှငျ့ အခွခေံ အဆောကျအဦး တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေး တရုတျနိုငျငံ၏ ငှကွေေးနှငျ့ နညျးပညာ ကြှမျးကငြျမှုကို လိုအပျသောကွောငျ့ ထိုကဲ့သို့သော စီမံကိနျးမြားတှငျ တရုတျနိုငျငံနှငျ့ မိတျဖကျပွုခဲ့ကွသညျ။ သို့သောျ ယခု အဖွဈအပကြျက အဆိုပါနိုငျငံမြားသညျ တရုတျနိုငျငံ၏ ငှကွေေးအတှကျ ပွနျလညျပေးရမညျ့ သတျမှတျခကြျမြားကို မကြျစိမှိတျ လကျခံလိုကျရနျ ဆန်ဒမရှိကွောငျး ဖောျပွလိုကျခွငျးလညျး ဖွဈပါသညျ။
တရုတျနိုငျငံ၏ စီးပှားရေး သွဇာအတှကျ အကနျ့အသတျလညျး ဖွဈပါသညျ။ တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ အခွားနိုငျငံမြားထံမှလညျး အလားတူ စိတျမသကျသာစရာ တုနျ့ပွနျမှုမြိုး မြှောျလငျ့ရနိုငျသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၁၅ ရကျနေ့တှငျ ပါကစ်စတနျနိုငျငံက တရုတျ-ပါကစ်စတနျ စီးပှားရေး စငျ်ကွနျ၏ တစိတျတပိုငျးဖွဈသော အမရေိကနျ ဒေါျလာ ၁၄ ဘီလီယံတနျ Diamer-Bhasha ဆညျ တညျဆောကျရေးကို ရုပျသိမျးလိုကျကွောငျး ကွညောခဲ့သညျ။ တရုတျအစိုးရက ခမြှတျသညျ့ စညျးကမျးသတျမှတျခကြျ အခြို့ကို သဘောမတူသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
အစ်စလာမျမာဘတျမှ ရနှေငျ့ စှမျးအငျ ဖှံ့ဖွိုးရေး အာဏာပိုငျ အဖှဲ့အကွီးအကဲ၏ အဆိုအရ တရုတျနိုငျငံက စီမံကိနျးနှငျ့ လုပျငနျး လညျပတျမှုတှငျ ပိုငျဆိုငျမှု တောငျးဆိုခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးပေးရနျလညျး ၎င်းငျး၏ ကိုယျပိုငျတပျဖှဲ့မြားကို အသုံးပွုရနျ ဆန်ဒ ရှိကွောငျး သိရသညျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံက ဆညျစီမံကိနျးကို ဆကျလကျဆောငျရှကျရနျ ကိုယျပိုငျ ဘဏ်ဍာငှကေို အသုံးပွုသှားမညျ ဖွဈသညျ။ Diamer-Bhasha ဆညျက လြှပျစဈဓာတျအား ၄၅၀ဝ မီဂါဝပျ ထုတျလုပျပေးနိုငျမညျဟု မြှောျလငျ့ရပွီး ထိုပမာဏသညျ တိုငျးပွညျ၏ စှမျးအငျလိုအပျခကြျနှငျ့ အနီးစပျဆုံး တူညီနသေညျ။
အမရေိကနျဒေါျလာ ၆၂ ဘီလီယံတနျ တရုတျ-ပါကစ်စတနျ စီးပှားရေး စငျ်ကွနျ (CPEC) စီမံကိနျးတှငျ မပါဝငျမီက ပါကစ်စတနျ နိုငျငံသညျ Diamer-Bhasha ဆညျ တညျဆောကျရေးအတှကျ ကမ်ဘာ့ဘဏျနှငျ့ အာရှဖှံဖွိုးရေး ဘဏျတို့မှ ဘဏ်ဍာရေး အထောကျအပံ့ရရှိရနျ ကွိုးစားခဲ့သညျ။ သို့သောျလညျး စီမံကိနျး၏ တညျနရောသညျ အငွငျးပှားမှုမြား ရှိနသေော ကတျရျှမီးယား ဒသေမှ ပါကစ်စတနျ ထိနျးခြုပျသညျ့ ဧရိယာတှငျ ရှိနခွေငျးကွောငျ့ ဘဏ်ဍာရေး အထောကျအပံ့ ပေးရနျ ထိုအဖှဲ့အစညျး ၂ ခု လုံးက ငွငျးပယျခဲ့သညျ။
လုပျဆောငျနခေဲ့သညျမှာ ၁၅ နှဈ ရှိပွီ ဖွဈသော စီမံကိနျး နှောငျ့နှေး ကွနျ့ကွာမှု အမွောကျအမွား ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး ပါကစ်စတနျ နိုငျငံက ဆညျပွီးစီးရနျ လိုအပျသော ငှကွေေး အထောကျအပံ့ မရှာဖှနေိုငျခဲ့လြှငျ ပို၍ပငျ နှောငျ့နှေးသှားမညျ ဖွဈသညျ။
CPEC က ရထားလမျးမြား၊ စှမျးအငျ စကျရုံမြား၊ သယျယူပို့ဆောငျရေး စနဈနှငျ့ ဂှါဒါ Gwadar ဆိပျကမျး အပါအဝငျ အခွားစီမံကိနျးမြားကို ဆကျလကျ ငှကွေေး ထောကျပံ့ပေးသှားမညျ ဖွဈသညျ။ အမရေိကနျ နိုငျငံနှငျ့ ဆကျဆံရေး အခွအေနေ ဆိုးရှားလာခဲ့သညျ့ အခြိနျတှငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အကူအညီအတှကျ တရုတျနိုငျငံအပေါျ ပို၍ မှီခိုလာရသညျ့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံအနဖွေငျ့ ဆညျအတှကျ တရုတျနိုငျငံ၏ ဘဏ်ဍာရေး အထောကျအပံ့ကို ငွငျးပယျရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျခွငျးက မြားစှာ ပို၍ပငျ ထူးခွားနပေါသညျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံက ထိုဆုံးဖွတျခကြျကို အလှယျတကူ ပွုလုပျလိုကျခွငျး မဟုတျသောျလညျး တရုတျနိုငျငံက လိုခငြျသညျ့ စညျးကမျးခကြျမြားကို ၎င်းငျးတို့ လကျမခံနိုငျခဲ့ပါ။ တရုတျလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့မြားက စောငျ့ကွပျသော တရုတျနိုငျငံပိုငျ ရကောတာ ဆိုသညျမှာ လကျခံနိုငျသညျ့ အတိုငျးအတာထကျ ကြောျလှနျ၍ နသေညျ။
နီပေါနိုငျငံက Budhi Gandaki ရအေားလြှပျစဈ စီမံကိနျးဆောငျရှကျရနျ တရုတျအစိုး ရပိုငျ ကုမ်ပဏီတခု ဖွဈသညျ့ China Gezhouba Group နှငျ့ ပွုလုပျထားသော အမရေိကနျဒေါျလာ ၂.၅ သနျးတနျ သဘော တူညီခကြျကို ဖကြျသိမျးမညျ ဖွဈကွောငျး ကွညောခဲ့သညျ။
အဆိုပါ ရအေားလြှပျစဈ စကျရုံက ဓာတျအား ၁၂၀ဝ မီဂါဝပျ ထုတျပေးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ သဘောတူညီခကြျကို နီပေါနိုငျငံက OBOR တှငျပါဝငျရနျ သဘောတူညီပွီး ၁ လပငျ မကွာသေးသညျ့ ပွီးခဲ့သညျ့ ဇှနျလအတှငျးတှငျ ထိုအခြိနျက အာဏာရရှိထားသညျ့ တရုတျအစိုးရကို လိုလားသော မောျဝါဒီတို့ လှမျးမိုးသညျ့ အစိုးရက ပွုလုပျခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ထိုအစိုးရကို ကွားဖွတျအစိုးရတခုနှငျ့ အစားထိုးခွငျး ခံရသညျ။ သဘောတူညီခကြျကို ဖကြျသိမျးရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျရခွငျး၏ အဓိကကဩညျ့ အခကြျမှာ ယှဉျပွိုငျမှု ပါဝငျသော ဈေးပွိုငျ အဆိုပွုသညျ့စနဈ မပါဝငျဘဲ သဘောတူညီခကြျ ပွုလုပျခဲ့သောကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု နောကျတကျလာသညျ့ ကွားဖွတျအစိုးရက ပွောသညျ။ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးဖွတျခကြျ ခရြခွငျး၏ နောကျကှယျတှငျ ကွားဖွတျအစိုးရအတှငျးမှ အိန်ဒိယကို ထောကျခံသညျ့ ဂိုဏျးရှိနသေညျဟု အမြားစုက ထငျကွေးပေး မှနျးဆခဲ့ကွသညျ။
နီပေါနိုငျငံသညျ ကမ်ဘာပေါျတှငျ လူဦးရေ အမြားဆုံး နိုငျငံကွီး ၂ ခုကွားမှ သွဇာယှဉျပွိုငျမှုတိုကျပှဲ၏ အစိတျအပိုငျး ဖွဈနခေဲ့သညျမှာ ကာလကွာမွငျ့ခဲ့ပွီ ဖွဈပါသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၂၆ ရကျနေ့တှငျ ရှေးကောကျပှဲ ကငြျးပရနျ ရှိနခွေငျးနှငျ့အတူ အနာဂတျတှငျ နီပေါနိုငျငံအတှငျးမှ တရုတျကို လိုလားသော ဂိုဏျးမြားနှငျ့ အိန်ဒိယကို လိုလားသော ဂိုဏျးမြားကွား၌ ဟနျခကြျညီမြှမှု ရှိရေးကလညျး မရမေရာ ရှိနဆေဲ ဖွဈသညျ။ သို့သောျလညျး အဆိုပါ ဂိုဏျး ၂ ခု ကွားမှ အားပွိုငျမှုက မညျသညျ့အတှကျကွောငျ့ နီပေါနိုငျငံက သဘောတူညီခကြျ ဖကြျသိမျးလိုကျသညျ ဆိုခွငျးနှငျ့ မညျသညျ့အတှကျကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံသညျ ၎င်းငျး၏ မိတျဖကျမြား၏ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး သခြောအောငျ ပွုလုပျရာတှငျ အခကျအခဲမြား ကွုံနရေသညျ ဆိုခွငျးတို့၏ အစိတျအပိုငျးတခုသာ ဖွဈပါသညျ။
ဟောငျကောငျ အခွစေိုကျ South China Morning Post သတငျးစာ၏ ဆောငျးပါး တပုဒျတှငျ အထကျပါ သဘောတူညီခကြျ ၂ ခု ပယျဖကြျလိုကျခွငျး၏ ပိုမိုကွီးမားသော ဂယကျရိုကျမှုမြားကို ဖောျပွထားသညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စကို တရုတျနိုငျငံက မညျကဲ့သို ကိုငျတှယျခဲ့သညျဆိုခွငျးက စိတျဝငျစားဖှယျရာ ဖွဈကွောငျး တရုတျ သတငျးစာက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝဖေနျခဲ့သညျ။
တရုတျသတငျးစာမြားက သမ်မတ ရှီကငြျဖငြ့ျ၏ အမှတျတံဆိပျ စီမံကိနျး နှငျ့ ပတျသကျနသေော ပွဿနာမြားကို အသိအမှတျပွု ဖောျပွလေ့မရှိပါ။ သို့သောျလညျး OBOR တှငျ ပွဿနာမြား ရှိနကွေောငျး စတငျ၍ သတိပွုမိလာကွပွီ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ သဘောတူညီခကြျမြား ပကြျပွားခွငျးက OBOR သညျ ကြိုးကွောငျးဆီလြောျ ရှငျးလငျးသညျ့ ဗြူဟာတခု မပါဝငျသညျ့ အလှနျအကြှံ ရညျမှနျးခကြျကွီးသော ဆောငျရှကျမှုတရပျ ဖွဈသညျဆိုသော အခကြျနှငျ့ သကျဆိုငျနသေညျ။
OBOR ၏ ကုနျးတှငျး စီးပှားရေး စငျ်ကွနျ ၆ ခုမှ ၁ ခုသညျ တရုတျနိုငျငံ အနောကျပိုငျး ရှငျကနြျး Xinjiang ပွညျနယျမှနေ၍ ပါကစ်စတနျ တနိုငျငံလုံးကို ဖွတျကြောျ၍ အာရဗေီယံပငျလယျမှ ဂှါဒါ Gwadar ဆိပျကမျးအထိ သှယျတနျးထားသညျ။ ပါကစ်စတနျက ထိုစီမံကိနျးသညျ တရုတျနိုငျငံနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ နီးကပျသော ဆကျဆံရေး၏ အဓိက အစိတျအပိုငျးတရပျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့နိုငျငံတှငျ ကာလကွာရှညျစှာ ရှိနခေဲ့သော အခွခေံအဆောကျအဦး အားနညျးမှုကို ဖွရှေငျးရနျ အားထုတျမှု တခု အဖွဈ မွငျခဲ့သညျ။ သို့သောျလညျး စီမံကိနျးတှငျ တရုတျနိုငျငံ၏ အဓိက စိတျဝငျစားမှုမှာ တရုတျကုမ်ပဏီမြား အကြိုးအမွတျရရှိရေး သခြောစရေနျ၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကုနျစညျမြားအတှကျ ဈေးကှကျသဈမြား ရှာဖှရေနျနှငျ့ ပငျလယျရကွေောငျးလမျးမြား ပေါျတှငျ မှီခိုခွငျး မရှိသော ကုနျသှယျလမျးကွောငျးသဈ တခု ထူထောငျရနျ ဖွဈကွောငျး ပါကစ်စတနျနိုငျငံက နားလညျသညျ။
အဆိုပါ အခွခေံအဆောကျအဦ စီမံကိနျးမြားတှငျ တရုတျနိုငျငံ၏ ခဉြျးကပျမှုကို ဝဖေနျသညျမှာ ပါကစ်စတနျနှငျ့ နီပေါ တို့သာ ဖွဈဖှယျရာ မရှိပါ။ OBOR ၏ အစိတျအပိုငျး အနဖွေငျ့ အရေးပါသညျ့ အခွားသော စီးပှားရေး စငျ်ကွနျ တခု ထူထောငျရနျ တရုတျနိုငျငံက ရညျရှယျထားသော အာရှအလယျပိုငျး နိုငျငံမြားကလညျး မိတျဖကျမြား အပေါျ အလှနျအကြှံ ဝနျပိစသေညျ့ တရုတျနိုငျငံ၏ တောငျးဆိုခကြျမြားကို ကနျ့ကှကျလာကွနိုငျပါသညျ။ အဆိုပါ နိုငျငံမြားက တရုတျနိုငျငံ၏ ဘဏ်ဍာရေး အထောကျအပံ့ကို လိုခငြျပါသညျ။ သို့သောျလညျး မညျသညျ့နညျးဖွငျ့ ရသညျဖွဈစေ ယူလိုကျမညျဆိုသညျ့ သဘောမြိုး ထားကွမညျ မဟုတျပါ။
(geopoliticalfutures.com ပါ Kamran Bokhari ၏ China’s One Belt, One Road Faces Pushback ကို ဘာသာပွနျဆိုသညျ)
မြစ်ဆုံအကြောင်း ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ကို တစ်လလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရမလောက်
သိုင်းဝိုင်းပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြပေးနေတဲ့အတွက် ပညာလည်းရ၊ ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်။
အချိန်ကုန် ပင်ပန်းခံ တင်ပြပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
တိုက်တန်းနစ် ပုံစံတူ သဘောင်္ကြီး ပြီးရင်တော့ စီးချင်လိုက်တာ….